देउवालाई ओलीको प्रश्नः बैशमै बृद्धभत्ता खाने हो ? | Dainik Sanjal
Home राजनीति देउवालाई ओलीको प्रश्नः बैशमै बृद्धभत्ता खाने हो ?
देउवालाई ओलीको प्रश्नः बैशमै बृद्धभत्ता खाने हो ?
११ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री मानिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ सरकारले देशलाई कंगाल बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
एमालेले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका पछिल्लो निर्णयहरुको आलोचना गरेको छ । साथै उसले संविधान, कानुन र राष्ट्र हित विपरितका निर्णयहरु नयाँ सरकारले अस्वीकार गर्ने समेत बताएको छ ।
देउवा सरकार संविधानको गलत ब्याख्या टिकेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले जाने बेलामा जथाभावी निर्णय गरेर देश र अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पार्न खोजेको बताए ।
सरकारले बजेट ल्याएको हो कि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो भन्दै ओलीले भने, ‘कि पैसा राख्ने ठाउँ नभएर हल्का गरौं भनेर वितरण गरेको हो ?’
वाम कार्यदलको निर्णयः प्रदेशमा कुल सांसदको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री
मुख्यमन्त्री र सभामुखको टुंगो माघ १४ गते लगाइने
११ माघ, काठमाडौं । एमाले र माओवादीका नेताहरु प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने मन्त्रीहरु छनोट गर्न सहमत भएका छन् । संविधानले भने प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने ठाउँ दिएको छ ।
विहीबार सिंहदरबार बसेको वाम कार्यदलको बैठकले प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशतमात्रै मन्त्री बनाउने सहमति गरेको हो । आफूहरुले मुख्यमन्त्री सहित सरकार बनाउने प्रदेशमा १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाइने बैठकपछि एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
संविधानले प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरे पनि देशभरि मन्त्रीको संख्या धेरै हुने भएकाले १० प्रतिशतमात्रै मन्त्री बनाइने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेताले बताए ।
वाम गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने देखिन्छ । ती प्रदेशहरुमा सानो संख्याको प्रदेश सरकार बन्ने नेताहरुले बताएको छ ।
मुख्यमन्त्री र सभामुखको टुंगो लागेन
कार्यदलको बिहीबारको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरुको नाम टुंगो लगाउने भने पनि त्यसबारे माघ १४ गते पुन छलफल हुने एमाले नेता पाण्डेले बताए ।
मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखबारे विहीबारको बैठकमा सामान्य छलफल भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रदेश सरकारमा माओवादी र एमालेकोे सिट संख्या निर्धारण गर्दा नेताहरुको व्यवस्थापन, समावेशिता र पार्टी एकताको स्पिरिटका सम्बन्धमा छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश १ र ३ मा एमालेको सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको, साथै ४ र ५ मा पनि एमालेकै सरकार बन्ने पाण्डेको भनाइ छ । त्यसैले मुख्यमन्त्रीका सन्दर्भमा प्रदेश नं ६ र ७ मा मात्रै छलफल बाँकी रहेको उनले बताए ।